Gottesdienst oder Götzendienst - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2019-01 > पूजा वा मूर्ति पूजा
केही व्यक्तिहरूको लागि, विश्व दृश्यको छलफल बढी शैक्षिक र अमूर्त देखिन्छ - दैनिक जीवनबाट धेरै टाढा। तर पवित्र आत्माद्वारा ख्रीष्टमा परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनेहरूका लागि थोरै चीजहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र उनीहरूले वास्तविक जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्दछन्। हाम्रो विश्व दृश्यले हामी कसरी सबै किसिमका विषयहरू हेर्ने निर्णय गर्दछ - ईश्वर, राजनीति, सत्य, शिक्षा, गर्भपतन, विवाह, वातावरण, संस्कृति, लि gender्ग, अर्थव्यवस्था, यो मानव हुनु भनेको के हो, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति - केही थोरै नाम राख्नु।
हाम्रो विश्वदृश्यको अभिविन्यास
यदि हाम्रो विश्वदृष्टि र हाम्रो पहिचानको जोडिएको अनुभूति ईसाई केन्द्रित भन्दा बढी सांसारिक उन्मुख छ भने, यसले हामीलाई ख्रीष्टको सोचाइबाट एक वा अर्को तरिकामा टाढा लैजान्छ। यस कारणले गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हाम्रो विश्व दृश्यको सबै पक्षहरूलाई पहिचान गर्नु र व्यवहार गर्नुपर्दछ जुन ख्रीष्टको शासनको अधीनमा छैन।
मानव संस्कृति संग हाम्रो सम्बन्ध
हाम्रो वरिपरिको संस्कृतिको पापी गुणहरूको विपरित - येशूका अनुयायीहरू भनेर बोलावट गर्न आवश्यक अत्यावश्यक सांस्कृतिक विरोधी बाँच्न आवश्यक छ। भनिन्छ कि येशू यहूदी संस्कृतिमा एउटा खुट्टासहित बस्नुहुन्थ्यो र अर्को खुट्टाको साथ परमेश्वरको राज्यको मूल्यमान्यतामा दृढतापूर्वक जडित हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरको अपमान गर्ने विचारधारा र प्रचलनहरूले उनलाई पक्रन नपरोस् भनेर उनले प्रायः संस्कृतिलाई अस्वीकार गरे। यद्यपि, येशूले यस संस्कृति भित्रका मानिसहरूलाई अस्वीकार गर्नुभएन। बरु, उहाँ तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूप्रति अनुकम्पा देखाउनुभयो। परमेश्वरको तरिकाको विपरित संस्कृतिका पक्षहरूलाई प्रकाश पार्दै उनले राम्रो पक्षहरूलाई पनि जोड दिए - वास्तवमा सबै संस्कृतिहरू यी दुईको मिश्रण हुन्।
हामीलाई येशूको उदाहरण पछ्याउन भनिएको छ। हाम्रो पुनरुत्थान भएका र स्वर्गारोहण प्रभुले हामीलाई स्वेच्छाले उहाँको वचन र आत्माको डो to्याइ स्वीकार्न आशा गर्नुहुन्छ ताकि उहाँको प्रेमको राज्यका वफादार राजदूतहरूको हैसियतमा हामी उहाँको महिमाको ज्योति अन्धकारमय संसारमा चम्किन सकौं।
मूर्तिपूजाबाट सावधान रहनुहोस्
तिनीहरूको संस्कृतिको साथ संसारमा राजदूतहरूको रूपमा बस्न, हामी येशूको उदाहरण पछ्याउँदछौं। हामी मानव संस्कृतिको गहिरो पापको बारे निरन्तर सचेत छौं - जुन धर्मनिरपेक्ष विश्व दृश्यको समस्याको पछाडि समस्या हो। यो समस्या, यो पाप मूर्तिपूजा हो। यो दुखद वास्तविकता हो कि मूर्तिपूजा हाम्रो आधुनिक, आत्मकेन्द्रित पश्चिमी संस्कृतिमा व्यापक छ। हामीलाई यो वास्तविकता हेर्न गहिरो आँखा चाहिन्छ - दुबै वरपर र हाम्रो आफ्नै दृश्यमा। यो हेर्नु चुनौती हो किनभने मूर्तिपूजा हाजिर हुनु सधैं सजिलो हुँदैन।
मूर्तिपूजा भनेको परमेश्वर बाहेक अरू कुनै कुराको आराधना हो। यो प्रेम, भरोसा, र परमेश्वर वा अरू कसैलाई कसैको सेवाको बारेमा छ। पूरै धर्मशास्त्रमा, हामी परमेश्वर र ईश्वरीय गाइडहरू भेट्टाउँछौं जसले मानिसहरूलाई मूर्तिपूजा पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् र त्यसपछि यसलाई त्याग्छन्। उदाहरणको लागि, दस आज्ञा मूर्ति पूजा प्रतिबन्ध संग शुरू। न्यायाधीशहरूको पुस्तक र द प्रोफेट्स अफ द प्रोफेट्सले सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक समस्याहरू साँचो परमेश्वर बाहेक कसैलाई वा अरू केहीमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले गरेको कारण रिपोर्ट गर्छ।
हाम्रा सदस्यहरूलाई तालिम दिँदै
आधुनिक पश्चिमी संस्कृतिमा मूर्तिपूजा फस्टाउँदछ भन्ने कुरालाई महत्व दिदै हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई उनीहरूले सामना गरिरहेको खतरा बुझ्न सहयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामीले एउटा बेचेको पुस्ताको यो समझ प्रतिबिम्बित गर्नु पर्ने छ कि केवल मूर्तिपूजालाई केवल भौतिक वस्तुहरुको अघि झुकाउने कुरालाई सम्मान गर्दछ। मूर्ति पूजा भन्दा धेरै छ!
यद्यपि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि चर्चका नेताहरूको हैसियतमा हाम्रो बोलावटले मानिसहरूलाई उनीहरूको आचरण र सोचमा मूर्तिपूजा भनेको के हो भनेर औँल्याउँदैन। आफैले खोज्नु तपाईंको जिम्मेवारी हो। यसको सट्टामा, हामीलाई उनीहरूको खुशीका सहयोगीहरू भनिन्छ जसले उनीहरूलाई व्यभिचार र आचरणहरूको पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन मूर्तिपूजक सम्बन्धहरूको लक्षण हो। हामीले उनीहरूलाई मूर्तिपूजाका खतरहरूबारे सचेत गराउनु आवश्यक छ र तिनीहरूलाई बाइबलीय मापदण्ड दिनुपर्दछ ताकि ती विश्‍वदृष्टि र मूल्यमान्यताहरूको समीक्षा गर्न सक्दछन् कि उनीहरूले आफू विश्वास गर्ने ईसाई आस्थाको अनुरूप छन कि भनेर निर्धारण गर्न उनीहरूको विश्व दृश्य निर्धारण गर्छन्।
चर्चका नेताहरूको हैसियतमा हाम्रो बोलावटको एक भाग हाम्रा सदस्यहरूलाई संस्कृतिले हाम्रो हृदयमा कसरी अपिल गर्दछ भनेर बुझ्न मद्दत गर्नु हो। यसले केवल कडा चाहनाहरू मात्र पैदा गर्दैन, तर आकांक्षाको भावना र भित्री धारणा पनि कि यदि हामी विज्ञापन गरिएको उत्पादन वा जीवनशैलीलाई अस्वीकार गर्छौं भने हामी मूल्यवान व्यक्ति होइनौं। यस शैक्षिक कार्यको खास कुरा के हो भने हामीले मूर्ति बनाउने सबै भन्दा राम्रो चीजहरू हुन्। आफैंमा, राम्रो घर र राम्रो काम पाउनको लागि राम्रो छ। जहाँसम्म, जब ती चीजहरू हुन्छन् जसले हाम्रो पहिचान, अर्थ, सुरक्षा र / वा गरिमा निर्धारण गर्दछन्, हामीले मूर्तिलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दियौं। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई उनीहरूको सम्बन्ध मूर्तिपूजाको राम्रो चीज भएको बुझ्नको लागि मद्दत गर्नु पर्छ।
समस्याको पछाडि समस्याको रूपमा मूर्तिपूजा पहिचान गर्दा व्यक्तिहरूले राम्रो चीज लिने र तिनीहरूलाई मूर्ति बनाउने कुरा जान्नको लागि दिशानिर्देशहरू सेट गर्न मद्दत गर्दछ - जुन कुरा तिनीहरू शान्ति, आनन्द, व्यक्तिगत अर्थ र सुरक्षा छोड्नुहोस्। यी ती चीजहरू हुन् जुन केवल भगवानले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। राम्रो चीजहरूले मानिसहरूलाई "परम चीज" मा परिणत गर्न सक्दछ सम्बन्धहरू, पैसा, प्रसिद्धि, विचारधारा, देशभक्ति, र निजी धार्मिकता। बाइबल यो गर्ने व्यक्तिको कथाहरू भरिएको छ।
ज्ञानको युगमा मूर्तिपूजा
हामी उनीहरूलाई उनीहरूको गहिराइको मान र मान्यताहरू - उनीहरूको विश्व दृश्य पहिचान गर्न प्रशिक्षण दिएर मद्दत गर्न सक्दछौं। हामी उनीहरूलाई प्रार्थनामा कसरी चिन्ने भनेर सिकाउन सक्छौं, किन तिनीहरू समाचार वा सोशल मिडियामा केहि कडा प्रतिक्रिया दिन्छन्। हामी तिनीहरूलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्न मद्दत गर्न सक्छौं: म किन रिसाएको? म किन यत्तिको दृढ महसुस गर्छु? यसको मूल्य के हो र यो कहिले र कसरी यो मेरो लागि मूल्य भयो? के मेरो प्रतिक्रियाले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ र मानिसहरूप्रति येशूको प्रेम र अनुकम्पा व्यक्त गर्दछ?
यो पनि नोट गर्नुहोस् कि हामी आफैं हाम्रो हृदय र दिमागमा "पवित्र गाईहरू" - विचारहरू, मनोवृत्तिहरू, र हामीले भगवानले छुनु नचाहेको चीजहरू, "ती चीजहरू" सम्बन्धी अवगत छौं। चर्चका अगुवाहरू भएको नाताले हामी परमेश्वरलाई हाम्रो आफ्नै विश्वव्यापी दृश्यलाई प्रमाणित गर्न आग्रह गर्दछौं ताकि हामी जे भन्छौं र गर्छौं त्यसले परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउन सक्छ।
मसीहीहरूको हैसियतमा हाम्रो धेरै जसो मिसेटिप्स हाम्रो व्यक्तिगत विश्व दृश्यको अक्सर ज्ञात प्रभावमा आधारित हुन्छन्। सबैभन्दा हानिकारक प्रभावहरू मध्ये एक एक घाईते भएको संसारमा हाम्रो मसीही साक्षीको घट्ने गुण हो। धेरै जसो हामी तत्कालका सवालहरूलाई एक तरिकामा सम्बोधन गर्दछौं जुन हामी वरिपरिको धर्मनिरपेक्ष संस्कृतिको पक्षपातिक दृष्टिकोण झल्काउँछ। नतिजा स्वरूप, हामी मध्ये धेरैले हाम्रो संस्कृतिमा समस्याहरू समाधान गर्न अनिच्छुक छौं, जसले हाम्रो सदस्यहरूलाई कमजोर बनाउँछ। हामी ख्रीष्टको Hisणी छ कि आफ्ना मानिसहरूलाई उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न र ख्रीष्टको अनादर गर्ने विचार र आचरणहरूको प्रजनन स्थल हुनसक्दछ। हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई तिनीहरूको हृदयको मनोवृत्तिहरू मुल्या .्कन गर्नुपर्दछ र ती सबै भन्दा बढि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने ख्रीष्टको आज्ञाको आलोकमा छन्। यसको मतलब हो कि तिनीहरूले सबै मूर्तिपूजक सम्बन्धहरू चिन्न र तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सिक्छन्।
चार्ल्स फ्लेमिंग द्वारा